HomeWararka CiyaarahaThomas Tuchel oo ka warbixiyay dhaawaca soo gaaray Reece James Kulankii Manchester City
Chelsea ayaa ka walwalsan taam ahaanshaha Reece James ka dib markii daafaca lagu bedelay nus saac gudahood guuldaradii Man City ee Stamford Bridge Sabtidii.
James wuxuu u muuqday inuu soo gaaray dhaawaca kadib toban daqiiqo oo kaliya, Si kastaba ha ahaatee, isagoo isku dayay inuu ciyaaro ayaa laga saaray 20 daqiiqo ka dib waxaana lagu bedelay daafaca dhexe Thiago Silva, iyadoo Cesar Azpilicueta uu u dhaqaaqay booska garabka ee booska James.
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa ciyaarta ka dib sheegay in James uu ‘qalloocday’ anqawga, in kasta oo dhowr daawadayaal ay ku qiyaaseen inuu dhab ahaantii uu si xun u dhaawacmay sidaas darteedna uu wajahay waqti dheer oo maqnaasho ah.
Warbixinta Goal ayaa sheegeysa in 21 jirkaan uu garoonka ka baxay isagoo ku duuban faashad.
“Ma hayo war kale oo isaga ku saabsan marxaladan laakiin aan aragno sida uu yahay maalmaha soo socda.”